Momba anay - Foshan Cerarock Ceramics Co., Ltd.
Ny orinasa Cerarock dia naorina nandritra ny 8 taona mahery tany Xiamen China. Nanomboka teo dia nanolotra vokatra seramika & porselana ary mamolavola vahaolana ho an'ny mpanjifa amin'ny fanavaozana, kalitao ary serivisy koa isika. Taorian'ny taona fampandrosoana, isika
niaina fitomboana nahagaga nandritra ny taona maro. Ary ankehitriny dia mitatra any amin'ny firenena 30 mahery ny fahatongavan'izao tontolo izao eto amintsika.
Zayed Wu dia niasa tao amin'ny Vondrona Xiamen Minmetals nandritra ny 18 taona mahery taorian'ny niorenany tamin'ny Business English Major, ity orinasam-panjakana ity ary nanolotra sarisary lehibe ho an'i Andriamatoa Zayed hitrandraka ny fahaizany. Nandritra ny 18 taona lasa, Zayed dia nianatra lalina tamin'ny fananganana faritra sy ny fanondranana tranga, izay nametraka fototra mafy orina ho an'ny orinasam-pifandraisana namboariny.
Tamin'ny 2002 ihany koa dia niasa tany ivelany tany Qatar nandritra ny 2 taona izy ary tena voataonan'ny kolontsaina Silamo tao, izay no nahatonga ny anaran'i ZAYED. Nanomboka tamin'ny taona 2005, i Zayed dia nipetraka an-tsokosoko tamin'ny asa an-tsokosoko, izay fomba iray natokana ho azy tokoa. Satria ny foiben'ny tsipika Rustic Jinjiang no tanàna niaviany, mitombo miaraka amin'ny tontolo iainana seramika serasera ary ny loharanon-karena rehetra azon'ny havana dia mahatonga ny orinasany vaovao vao haingana. Ka vokatra ara-boajanahary ho an'ny Cerarock no niforona tamin'ny 2012.
Ny tambajotra famokarana Cerarock dia mitondra ny fironana sy fanavaozana farany eo am-baravaran'ny mpanjifanay. Ny fahafahantsika mivelatra dia mandika ho fisafidianana be sy fizarana haingana. Miaraka amin'i Cerarock, ny mpanjifa dia miditra haingana amin'ny tsy manam-paharoa ary, amin'ny tranga maro, vokatra voalohany. Manolotra ny loko farany, vita sy vita amin'ny makiazy isika, miaraka amina maro an'isa amin'ny fandrindrana ny sombin-javatra sy sombin-javatra.
Cerarock dia manolo-tena hanamafisana ny vidiny omena ny mpanjifa tsirairay. Ny ekipan'ny Cerarock dia mivoatra hatrany, mamolavola ary manadio mba hanomezana ny vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra.
Mpiasa sy QC:
Tsy misy entana halefa any amin'ireo mpanjifantsika raha tsy avy amin'ny fisavana akaiky ny CERAROCK QC Team; Tsy misy varotra hifandray mivantana amin'ny mpanjifa tsy mijanona amin'ny atrikasa hianatra ny fomba famokarana & fanamarinana kalitao; "Ny anarako dia antoka ho anao".
Lohateny: Addy RM 706, trano Xin JieChuang. No707 Hu'An Road, Distrikan Hu Hu, tanàna Xiamen
Sampana Foshan Manampy: Tsia. 01-05, rihana faha-2, Hall B, ny tanàna Shiare Sanitary Ware, Distrika Chan Cheng, Tanànan'i Foshan
Ny mariky ny Cerarock dia toy ny "WHALE"
Ny "loko manga" dia mampiseho ny GLOBE izay tsena eran-tany.
Ny "loko miloko" dia maneho ny finoana matanjaka.
"Ny anarako dia antoka anao" no misolo tena ny lehiben'ny fandehan-draharaha.
"Dots Telo eo an-tampon'ny Cerarock" dia mampiseho ny filozofan'ny sinoa amin'ny lanitra & ny tany & ny olona.
Ny dikan'izany rehetra dia hoe miezaka izahay ho tonga tetezan'i Sina sy izao tontolo izao eo ambany fitarihan'ny filozofia sinoa.